Ao Shina, Voalaza Fa Manampy Hampanginana Ny Resaka Panama ilay Horonantsarim-Fanafihana · Global Voices teny Malagasy
Ao Shina, Voalaza Fa Manampy Hampanginana Ny Resaka Panama ilay Horonantsarim-Fanafihana
MpanoratraLiu Willow Jiang
Voadika ny 10 Avrily 2016 15:44 GMT
Raha tokony ho tatitra momba ireo Taratasin'i Panama, dia tranganà fanafihana maivana kely iray no navadik'ireo fampahalalam-baovaon'ny tanibe Shina ho tantara tamin'ny vaovao tontolo andro / 24ora amin 24 ora. Pikantsary tamin'ny lahatsarin'ny CCTV.
Any Shina, mitarika resaka an-tserasera mikasika ny herisetra-mifototra amin'ny mahavavy na mahalahy ao amin'ny firenena ny fanafihana miharihary nanjo vehivavy tany amin'ny Hotely iray ao Beijing, ary — indrindra ahiahian'ny mpiserasera maro — ho maka ny toeran'ny adihevitra manodidina ny fiporitsahan'ireo Taratasin'i Panama, izay hit tsotra izao ho tsy noraharahian'ny haino aman-jery Shinoa mihitsy.
Nitranga tao amin'ny Hotely Heyi ny 3 Avrily teo ny raharaha. Tahaka ny hita avy ao amin'ny horonantsarin'ny CCTV an'ny hotely, vehivavy iray no notafihan'ny lehilahy tsy fantatra iray ary notarihina nanerana ny lalantsaran'ny hotely teo imason'ireo mpitazana, isan'izany ny mpiasan'ny hotely.
Nihoraka niantso vonjy izy fa tsy nanao na inona na inona hanakanana ilay lehilahy ireo mpiasan'ny hotely. Tafaporitsaka ilay vehivavy noho ny fanampian'ny vahiny iray tao amin'ilay hotely ary tafatsoaka ilay noahiahiana.
Ny 5 Avrily, nakarin'ilay niharan'ny herisetra ilay lahatsary ho ao aminà kaonty iray vao nosokafana tamin'ny anaran'i Wanwan_2016 ao amin'ny Weibo, na Twitter-n'i Shina, ny andro taorian'ny namoahana ireo poritsaka.
Niporitsaka avy tany amin'i Mossack Fonseca ireo Taratasin'i Panama, kabinetranà mpahay lalàna (mpisolovava) mipetraka ao Panama izay manampy ireo mpanjifa mba hanorina orinasa anarany fotsiny any ivelan'ny fireneny mba hanafenana ny volan'izy ireo any ivelany, indraindray mba hanafenana tsy ara-dalàna ny volany tsy ho azon'ireo manampahefana mpitaky hetra any an-tanindrazany.
Voatondro amin'ireo antontan-taratasy 11.5 tapitrisa izay hita ao anatn'ilay poritsaka ny fianakavian'ny mpikambana telo sangany ao amin'ny filankevitry ny antoko Kaominista Shinoa, ny kaomity maharitry ny birao politika, anisan'izany ny havan'ilay lehilahy matanjaka indrindra ao Shina, ny filoham-pirenena Xi Jinping.
Tao anatin'ny herinandro iray, ny tenifototra “Ankizivavy voatafika tao amin'ny Hotely Heyi” dia voajery in-2.6 laviitrisa ary niteraka resaka an-tserasera 2.6 tapitrisa. Efa azo nandrasana ihany, nivondrona ireo mpiserasera mba hitsikera ireo mpitazana, ny mpiasan'ny hotely ary ny polisy.
Nirohotra mba handrakotra ilay tranga ireo fampahalalam-baovao mahazatra.
Headline News, ny mpamoaka vaovao ofisialin'ny masoivohom-baovao Sina ao amin'ny Weibo, dia nanome nivantana ny vaovao farany avy amin'ny resaka ho an'ny mpanao gazety nataon'ny Hotely Heyi mba hialàna tsiny tamin'ny zava-nitranga.
Ny fitaterana mafonja atao aminà heloka bevava mpiseho isanandro tahàka izany dia nampahatsiahy ny maro ny fikasàna fahiny hanodina ny resaky ny daholobe tao Shina.
Eo ambanina filaharana fanehoankevitra avy amin'ny fanavaozam-baovaon'ny Headline News’ tamin'ilay resaka ho an'ny mpanao gazety, nankahàtra ny sivana an-tserasera ireo mpiserasera mba hampatsiahivana ny mpamaky sasany mikasika ny vaovao mety mifanaraka kokoa amin'ny tombontsoam-bahoaka.
Ahoana ny momba ilay zava-nitranga tany Panama?
Tetika iny zava-nisy iny, mba hanadinoan'ny olona ny zavatra hafa.
Tena namily ny saim-bahoaka soa aman-tsara tsy ho any Panama iny.
Niteny ny iray mpampiasa Weibo hoe :
突然炒出來住酒店的事被各種紅營銷號轉發引起大家輿論 來蓋住巴拿瑪事件嗎？ 這麼大的黑幕參與人都是位高權重的領導人 如果群眾都不聞不問的話 那是不是不會給大家個交代 讓國民心寒
Lasa niparitaka be io vaovao io taorian'ny namoahan'ireo kaonty ara-barotra maro miloko mena ary niteraka tsara mihitsy adihevitra teny amn'ny olona. Natao mba hanodinana ny saina amin'ny zava-nitranga tao Panamaaaa ve io [hadisoana natao hialàna amin'ny fanivanana teny faran'izay saropady ao amin'ny Weibo]? Shinoa mpitarika manana ny lanjany ireo olona voarohirohy ao anatin'ilay tantara ratsy, raha odian'ny vahoaka tsy hita ny zava-nitranga, dia tsy misy fanazavana fanampiny ilaina intsony. Mahatezitra izany.
Fomba fijery mitovy sahady no nifampizaràn'ireo samy mpiserasera ao anatin'ny fahafantarana ny momba ny fiparitahan'ireo Taratasin'i Panama:
Izany mihitsy no fomba fanodinkodinana saim-bahoaka. Mazava ho azy, raha betsaka ny haino aman-jery mampita totoafo io singa vaovao io, dia tsy hifantoka amin'ny raharaha 8NAMA [hadisoana natao hialàna amin'ny fanivanana teny faran'izay saropady ao amin'ny Weibo] ny olona.
Voasambotra ny 7 Avrily ilay noahiahiany ho nanafika ilay vehivavy, saingy mbola tohizan'ireo mpamoaka vaovao eo an-toerana foana ilay raharaha. Mandritra izay fotoana izay, dia fianianana hangina no hita manerana ny habaky ny haino aman-jery Shinoa momba ireo Taratasin'i Panama.
Araka ny tatitra avy amin'ny Fiarahana Misalahy Iraisampirenen'ny Mpanao Gazety Mpanadihady (ICIJ), ireo mpikambana roa hafa ao amin'ny birao politika Shinoa, hafa ankoatra an'i Xi mifandrirotra amin'ilay fiporitsahana, dia Ny Filoha Lefitra Zhang Gaoli ary ny mpitantsoratry ny antoko Liu Yunshan.
Hatramin'izao, tsy nisy fanehoan-kevitra ofisialy mikasika ny maha-voarohirohy manam-pahefana ambony ao amin'ny governemanta.Niteny ambangovangonay fotsiny ny Minisitry ny Raharaham-bahiny Wang Yi tamin'ny 8 Avrily fa nilaina ny ” fanazavana sy fitondrana fanazavana” momba ireo Taratasin'i Panama, nafa na fanehoankevitr'i Wang Yi aza tsy noraisin'ireo mpilaza vaovao Shinoa mahazatra.
23 ora izayFilipina